Booskee ka ciyaaraa xiddiga ay Arsenal ka doonayso kooxda reer Brazil ee Gremio?? – Gool FM
(London) 24 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dooneysa inay la soo saxiixato daafaca dhexe ee Walter Kannemann kaasoo u ciyaara Naadiga reer Brazil ee Gremio, sida wararku ay sheegayaan.
Gunners ayaa la rumeysan yahay inay indhaha ku heyso difaac cusub oo ay doonayso inay la soo wareegto ka hor xilli ciyaareedka soo socda gaar ahaan xiddig ka ciyaara dhanka daafaca dhexe.
Kannemann ayaa indhaha caalamka soo jiitay kaddib qaab ciyaareedkii uu ku soo bandhigay xulka qaranka Argentina xilli ciyaareedkan, Wargeyska Daily Mail ayaana sheegaya in kooxo Ingiriis ah ay aad ugu kulul yihiin saxiixiisa oo ay ku raad joogaan.
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ka mid tahay kuwa doonaya saxiixa 28-sano jirkaan, kaasoo qandaraaskiisa lagu burburin karo adduun dhan 10.2 milyan oo gini.
Atletico Madrid ayaa kooxda ka dhisan Waqooyiga London ee Arsenal kula tartamaysa saxiixa Kannemann, maxaa yeelay kooxda reer Spain ayaa faa’iido u haysata tababare Diego Simeone oo horay kooxda San Lorenzo ugala soo shaqeeyay ciyaaryahankan.